Iimveliso zeMakeup zemilebe Abavelisi kunye noMboneleli weLipstick | Banffee Makeup
Ekhaya > Iimveliso > Imilebe Makeup Products
Ileyibhile yabucala imilebe makeup iimveliso umenzi Banffee Makeup uphezulu umthengisi welipstick/umenzi ukwenzela i-matte lipstick, i-velvet lipstick, i-gloss yemilebe engagxiliyo. Kwakhona i-Banffee Makeup ngumvelisi we-lipliner oyingcali. Ukukhangela i-lipstick eninzi okanye i-lipstick yeleyibhile yangasese, nceda uqhagamshelane ne-Banffee Makeup, umenzi ohamba phambili we-lipstick e-China. Nokuba ufuna imveliso yokuhombisa imilebe ye-pigment ephezulu, i-matte lipstick ehlala ixesha elide, i-gloss engenamanzi, okanye i-lipstick ekhanyayo, sinokubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ukuhlangabezana neemfuno zakho.
1. I-Multi-shades ukuba ukhethe (i-matte / shimmer / glossy), ilungele zonke iintlobo zezihlandlo.
2. Ukulungeleka, indalo, kunye ne-moisturizing texture, kulula ukuyisebenzisa, ilungele zonke iintlobo zesikhumba.
3. Ayinankohlakalo, ayize ivavanye iimveliso kwizilwanyana.
4. I-pigment ebukhali, isicelo esigudileyo sokuba udlale ngemibala.
5. Ingangeni manzi kwaye ihlala ixesha elide imini yonke.
6. Eyakho i-ISO22716, i-GMPC, isatifikethi se-GMP, njl. Kwakhona, i-factory makeup yobuchwephesha ene-QC engqongqo.
7. One-stop OEM/ODM izisombululo, amkelwe ngezandla ezishushu ukwenza ngokwezifiso uphawu lwakho.
8. Ulingo lwesampula luyafumaneka phambi komyalelo omkhulu wesiko.
Ihowuliseyili China Matte umbala abavelisi-Banffee Makeup ngexabiso elihle-Banffee Makeup
I-velvet lipgloss iqulethwe yityhubhu yesikwere esineqabaka esicacileyo esinekepusi emnyama. Kulula ukubona imibala ngolwandlalo olucacileyo. Inemibala engama-20 iyonke kwisitokhwe.
Umenzi wemilebe yolwelo eyenziwe ngokwezifiso kunye nomthengisi-iBanffee Makeup
Ukunxiba ixesha elide, i-pigment ephezulu ye-lipstick enolwelo olugudileyo, igqibezela kunye nemini yonke, ilula. Njengesipho sosapho kunye nabahlobo.
I-Banffee enemibala eqaqambileyo yomilebe ethambisa amanzi ehlala ixesha elide enamanzi acwebezelayo akumgangatho ophezulu wamanenekazi ehoseyili
· Le gloss yokuthambisa yomlomo inika isiqabu ngoko nangoko xa udibana kwaye ikhusela imilebe eyomileyo, ekrazukileyo ngefomula epholileyo yehydrogel enceda ukutshixa ukufuma.
ileyibhile yabucala ethengisa izinto ezinkulu Akukho Logo Luxury Vegan matte 6 Colors Lip Kit Lipstick seti yezipho zokuzihombisa
Private ileyibheli matte makeup yokuqaba iseti isipho【Effects Multiple】 Ilipstick uye uhlale ixesha elide, manzi, ngokukhanyisa umbala iindevu, kandziyisa aya nokuthi imilebe, wenze ngokupheleleyo umlebe isilingo. lula kwaye ngaphandle nombala weplishi.【Easy ukuba Sebenzisa】 Nice yokuqaba makeup iseti matte entanjeni texture velvet, kulula aphose nokuzonwabisa ingubo yakhe imini yonke, kakhulu pigmential kwi imilebe ebukekayo.
Eyona nto iNgangenwa ngamanzi ixesha elide 2 kwi-Matte Lipgloss e-1 kunye noMboneleli weLipstick-Banffee Makeup
Malunga nale nto【Uyilo lwentloko ephindwe kabini】Isiphelo esinye yimatte lipstick, kwaye esinye isiphelo yimatte lip glaze. Uyilo olulodwa lwe-2 kwi-1 yonga ixesha namandla akho okufumana i-makeup entle yomlomo.【I-Matte Velvet Effect】Isilika, ukuthungwa okugudileyo kwekrimu yevelvet, isicelo esigudileyo, siphuhlisa umbala ngoko nangoko ngokucofa kube kanye, sisenza ukuba izimonyo zakho ziphelele kwaye zibe ntle.【Isiphumo esihlala sihleli】 Ingangeni manzi, ingasuki, imilebe engabambekiyo, ungagcina imilebe entle yokwakheka imini yonke emva kwesicelo.【Zizenzele eyakho iMakeup eNgcono】 Iseti ye-matte lipstick inokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho nangaliphi na ixesha. Vumela ukuba ube yingqwalasela yesihlwele.【Kumntu wonke】 Nokuba ulinenekazi okanye ungumfundi, nokuba ungumfundi oqalayo ukwenza izinto okanye igcisa lokuzilungisa. Unokukhetha le mveliso.
Eyona lipgloss ihlala ixesha elide kumthengisi welipstick ephezulu-Banffee Makeup
Iseti ye-lipstick enombala otyebileyo, i-lipstick ende kakhulu enxibe i-lipstick inezithako zokuthambisa ukuze uzive ukhululekile, uthambile kwaye usilika ongomisi imilebe yakho ngaphandle.
Ileyibhile yabucala yoleyibhile yomlomo we-matte cream lip pensile ivenkile
【Imibala eyi-19 edumileyo】 Uya kufumana iipakethe ezili-19 zemibala eyahlukeneyo yevelvet ebhityileyo epigmented imilebe ye-makeup liners, ipakethe yexabiso elikhulu iziqwenga ezili-19!【Iipensile zoMlebe& Ieyeliners】 Ezi liner zincinci kwaye zigudileyo zisenokusetyenziswa njengeeyeliners, ipensile enye yokusetyenziswa kabini, ukonga kunye nexabiso eliphezulu.
I-Banffee Ultra imenyezelayo epinki imilebe yeglosi imilebe yeglosi
I-balm yomlomo iqulethwe ngumbhobho ocacileyo oguquguqukayo. Kulula ukuyisebenzisa nge-bevel nozzle. Inemibala eyi-9 iyonke. Uyakwazi ukubona imibala ngokulula ngolwandlalo olucacileyo. Ukuzaliswa kwakhona kuhle kakhulu ngaphandle kwezithako ezinobungozi. Iyamenyezela, iyanyakamisa, kwaye ayinamanzi. Ivumba livakala njengeziqhamo eziswiti. Ilungele ukusetyenziswa kwemozulu yonke kwaye iya kunceda imilebe ukuba ihlale inomtsalane kwaye ifumisa imini yonke.
Umgangatho oPhezulu weVelvet Lipstick Ihoseyili-iGuangzhou Banffee Cosmetics Co., Ltd.
UKUBULALA: Isimo sengqondo saseFransi esiphefumlelwe bubuhle siya kukuthutha umbala ocebileyo,I-20 EYAHLUKILEYO UMBALA OMHLE : I-20 yombala wombala ukusuka kwisiseko ukuya kwimo enzulu.
Eyona nto iphambili yokukhuhla imilebe yezithako zokugquma imilebe yemaski kumzi mveliso wokwenza ubuhle
Iimpawu zesi sigqubuthelo somlomo:I-Pigment ePhakamileyo, iTinted, iManzi, ihlala ixesha elide, iFumisa, iHydrating, ukulungiswa, ukukhupha, imibala emininzi, iVegan, i-Organic, i-Cruelty Free, ayikhuthazi, ithambile, ayinabungozi, yeNdalo.Izinto zethu eziluncedo:1. Intengiso eshushu 5000pcs siyithumela nyanga nganye kwimarike yehlabathi.2. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu.3. Umzi-mveliso weXabiso ofikelelekayo uthengisa ngokuthe ngqo.4. Isampulu Ifumaneka kwisitokhwe.5. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza malunga ne-7days.Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ukuze uodole! Enkosi!
Owona mthengisi ubalaseleyo otshintsha umbala womlomo wokwenza ubuhle
I-lipstick inombala omangalisayo wokutshintsha umsebenzi, umbala uya kutshintsha ngokuxhomekeke kubushushu bomlomo wakho, kunye nokungangeni kwamanzi,ukunyakamisa, iinyosi, ziqulathe iiVithamini E, Izithako zeNdalo zenza ivumba elimnandi, zikhusela ngokukhuselekileyo umlebe ukuba ugqobhoze kwaye ufume imilebe yakho.
China imibala emi-3 engenabungozi i-oem odm imilebe yokukhuhla imilebe abavelisi-Banffee Makeup
I-Lip Scrub inokwakheka okucekeceke okukhupha imilebe ngokulula, ukulungisa ulusu lomlomo okrazukileyo kunye nokuphucula ubuthuntu.ishiya imilebe yakho ethambileyo igudile, ithambile kwaye iyahenda kakhulu.